Fran Lebowitz: Izwi reSatirical reNew York's Golden Age | News Literature
John Ortiz | | Biography, Mabhuku, Nyaya
Mashoko aFran Lebowitz
Fran Lebowitz munyori wekuAmerica akamira pachena mukupera kwemakumi manomwe nekuburitswa kwebhuku rake rekutanga: Hupenyu hweMetropolitan (1978). Mariri, akaseka hupenyu hwezuva nezuva hwenzanga yeNew York. Kusaremekedza kwake kwakamuita kuti asiyane nemhomho. Nekuda kwemaitiro ake akasarudzika, vanyori vazhinji vanomuenzanisa nemunyori wenhoroondo uye munyanyi Dorothy Parker.
Kubva kumaXNUMX yave ichitambura ne "writer's block." Kusika kwake kwekupedzisira kwaive kutamba kwevana Mr. Chas naLisa Sue Vanosangana nePandas (1994). Zvisinei, izvozvo hazvina kumumisa mubasa rake remazuva ose. Lebowitz akakunda mune dzimwe nzvimbo, senge terevhizheni uye firimu, sekuti, pamusoro pekuva munyori, munyarikani, mutori wenhau, uye mutauri.. Muna 2007, akagamuchira kusarudzwa kwemagazini Vanity Fair semumwe wevakadzi vakanaka kwazvo vegore.
1 Nhoroondo yezvinyorwa zvemunyori
1.1 Nzvimbo yebasa
1.2 Mabhuku ekunyora
1.3 Wakaipa Wokiya
1.5 Shanda muaudiovisual media
1.7 Tekinoroji kuramba uye kufamba
2 Fran Lebowitz mabhuku
2.1 Hupenyu hweMetropolitan (1978)
2.4 Mr. Chas naLisa Sue Vanosangana nePandas (1994)
Nhoroondo yezvinyorwa zvemunyori
Frances Ann Lebowitz akaberekwa musi weChishanu Gumiguru 27, 1950 muguta reMorristown muNew Jersey. Akakurira mutaundi rokumusha kwake, mumhuri yaiita zvechiJudha. Akanga ari mukadzi wechidiki akaoma uye anopandukira, nekuda kwechikonzero ichi akadzingwa kubva kuchikoro cheEpiscopal vachimupomera "general hostility".
Sezvo aisakwanisa kuenderera mberi nezvidzidzo zvake, akatanga kushanda mumabasa akasiyana-siyana. Aitengesa mabhandi, aiva mutyairi wetekisi uye kunyange kutsvaira dzimba. Rimwe remabasa ake ekutanga akakosha raive munzvimbo yekushambadzira nzvimbo yekutengesa yemagazini Kuchinja. Mumagazini ino akaburitsa kunyora kwake kwekutanga, mukuwedzera, akatanga nebhuku uye ongororo yemafirimu.
Mushure mechinguva, Andy Warhol akamuhaya semunyori wenhau indavhiyu. Zvadaro, akashanda kwemwaka mumagazini yeAmerican feminist Mademoiselle.
Muna 1978 akaburitsa bhuku rake rekutanga: Hupenyu hweMetropolitan, iyo yaive yakatengeswa zvakanyanya kubva payakatangwa. Makore matatu gare gare, nebasa rake rechipiri, Social Studies (1981), aive nekutambira kwakafanana kubva kuvaverengi. Mushure mekutora nzvimbo dzekutanga mukutengesa nemagwaro ese ari maviri, vatungamiriri vazhinji vakamupa mari hombe kuti aigadzirise kubhaisikopo, zvisinei, akaramba zvese zvinopihwa.
Makore gumi nematatu gare gare ese makopi akapepetwa uye akaburitswa se: Muverengi weFran Lebowitz (1994). Gore rimwe chetero akapa basa rake richangoburwa, nyaya yevana inonzi: Mr. Chas naLisa Sue Vanosangana nePandas (1994).
Kubva bhuku rake rekupedzisira muna 1994, Lebowitz akabata neyakagadzirwa block munzvimbo yemavara. Pasinei nekuva nemabasa ekunyora akawanda, haasati akwanisa kupedza chero chipi zvacho. Mhosva iri muruzhinji inyaya yebasa rake Zviratidzo Zvekunze Zveupfumi, iyo yakamiswa kwemakore nemunyori. Muna 2004, magazini Vanity Fair akabudisa pfupiso yebasa rake Budiriro, asi nanhasi haasati apedza.
Kunyangwe aine mukurumbira wemabhuku ake uye kuseka kuseka, akabudirira zvikuru munzvimbo dzakadai sekutaura pachena. Sezvineiwo, Lebowitz ave mumwe wevakurukuri vanoremekedzwa uye varikutsvakwa muUS nhasi.Akataura pamusoro peizvi:
"Chinhu chandinogona kuita pasina kana kuedza, chirevo changu muhupenyu huno. Ndine nguva yakanaka yekutaura, asi chinhu chega chandinovenga kuenda kunzvimbo yacho. Wese munhu ari munyika anokwira ndege anofanira kuwana cheki. Handitende kuti vanokubhadharisa nekuda kwechiitiko ichocho. "
Shanda muaudiovisual media
Kwemakore manomwe (2001-2007) aigara achitora rutivi munhevedzano Mutemo & Kurongeka, sehunhu hwemutongi Janice Goldberg. Uye zvakare, akaonekwa pane akasiyana ehurukuro anoratidza naConan O'Brien, Jimmy Fallon naBill Maher. Muna 2013 aive chikamu chevatambi vefirimu Mhuka yeWall Street, inotungamirirwa naMartin Scorsese.
Uyewo, yave iripo mune akati wandei zvinyorwa, kusanganisira Chiitiko cheAmerica, Nezve Susan Sontag (2014) y Mapplethorpe: Tarisa Mifananidzo (2016). Sokunge zviri pamusoro zvisina kukwana, Martin Scorsese akatungamirawo firimu remafirimu paLebowitz re HBOkufona Paruzhinji Kutaura (2010).
Muna 2021 akaita nyeredzi mune documentary Kunyepedzera, Iguta, iyo yakatanga pa Netflix platform uye ine zvikamu zvipfupi zvitanhatu. Kubva zvayakatanga kutepfenyura, yakunda mazana evateveri vanga vasingazive nezvemunhu anopenga uyu, curmudgeon uye kunakidzwa panguva imwe chete. Muchikamu chega chega, Lebowitz ane hurukuro nemutungamiriri Martin Scorsese nezve zuva reNew York.
Kwakadaro kwave kubudirira kwebasa, kuti akasarudzwa kuve Emmy 2021 muchikamu cheBest Documentary.
Tekinoroji kuramba uye kufamba
Imwe yezvikamu izvo the munyori imhaka yekuramba kwavo matekinoroji. Saka, haana serura kana kombiyuta. Panyaya iyi, akati: “… handina komputa. Ini hapana chandinoona paInternet, iri sarudzo yakanaka nhasi ”. Pamusoro pe, anoti haafarire kukwira ndege, saka haawanzoenda kuzororo, sezvo anoriona sebasa rakaipa.
Fran Lebowitz mabhuku
Hupenyu hweMetropolitan (1978)
Muunganidzwa wenyaya dzenyambo. Yakabudiswa muchiSpanish se Hupenyu hweMetropolitan (1984). Muzvinyorwa, munyori akaita chinyorwa chinotyisa nezve hupenyu hwemamirioni, akanaka uye ane mukurumbira anogara muNew York.. Pamusoro pezvo, akatsanangura zvakadzama - nekubata-bata-bata-mafambiro anoita mapoka evanhu munzvimbo dzakaita sefashoni, hunyanzvi uye zvinyorwa.
Munyori akarondedzera mhoteredzo yaanoziva zvakakwana, sezvo aiva mumwe wedenderedzwa iroro. Chokwadi chinoratidza kuti guta rakanga rakabata sei vanhu varo zvekuti hapana kana mumwe wavo angadai akagara mune rimwe guta, zvakanyanya munyika. Chinhu chakajairika pakati pavo kwaive kuvengana kunzvimbo dzekumaruwa dzakakomberedzwa nezvisikwa, mhuka dzinovaraidza, vanhu vasingagoni kuverenga nekunyora uye vana.
Ibhuku rechipiri remunyori. Yakabudiswa muchiSpanish se Pfupiso bhuku rekuchengetedza (1984). Nekuda kwebasa rake rekare, muunganidzwa uyu wakagamuchirwa zvakanaka uye wakagamuchirwawo bestseller. Kufanana nebasa rake rekutanga, Iine boka renyaya kwaaiita zvekunyomba nezvevanhu, mafaro uye nharaunda yedhorobha.
Nguva nyaya vanofarira comedy yakanyorwa, Zvinoratidzwa nemazvo, zvine hungwaru, uye zvisina hunhu.
Muverengi weFran Lebowitz (1994)
Iri basa rechitatu rekunyora mhedzisiro yemubatanidzwa wemabhuku ake maviri ekutanga akabudiswa, Hupenyu hweMetropolitan (1978) uye Social Studies (1981). Zvinyorwa zvakagadziriswa kuti zvibatanidze data raibvumira veruzhinji kudzidza zvakawanda nezvehupenyu nebasa remunyori. Kubva munyaya iyi documentary inozobuda Paruzhinji Kutaura (2010), Inotungamirirwa naScorsese.
Muverengi weFran Lebowitz
Mr. Chas naLisa Sue Vanosangana nePandas (1994)
Iri ibhuku rekufungidzira revana, rinotsanangura nzendo dzevana vaviri vane makore manomwe nemapere makuru maviri. Munyori anopa nyaya neake anosetsa anosetsa, ane nyeredzi Mr. Chas naLisa Sue. Sezvo vacheche vachiongorora zvivakwa muManhattan, vanowana peya yemapanda anonzi: Pandemonium uye Usaite Panda kune Ruzhinji. Basa racho rine mifananidzo naMichael Graves.
Mr. Chas naLisa Sue ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Biography » Fran lebowitz
Paula Ramos. Hurukuro nemunyori weBhuku reMazuva Matsvuku